Hiiraan, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Hiiraan, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
MSF waxa ay maamushaa cusbitaalka gobolka ee 99 sariirood qaada ee ku yaalla magaalada Baladweyne kaas oo daryeel caafimaad oo sarreeya oo lacag la’aan ah siiya 280,000 ee deggan gobolka. MSF waxa ay bixisaa qalliin degdeg ah; daryeelka dhaawaca, daryeel caafimaadka dadka waaweyn, daryeelka carruurta, daaweynta nafaqo-xumada ba’an waxaana ay diyaar u tahay in ay wax ka qabato xaaladaha caafimaad ee degdegga ah ee ku soo kordha gobolka. Waxaa kale oo jira qolalka xaaladaha degdegga ah iyo kuwa xaaladaha lagala socdo.
Mashruuca Beledweyne 2009-ka
Sanadkii 2009kii, ayaa 2,593 qof la dhigey cusbitaalka. 971 qalliin degdeg ah ayaa la sameeyey, 178 ka mid ahi waxa ay ahaayeen dad dhaawacyo ka soo gaareen rabshad. 1,411 carruur ah ayaa laga daweeyey nafaqo-xumo. Markii la soo sheegey in ay kordheen xaaladaha cudurka jadeecada, ayaa bishii Maarso 2009kii waxa ay MSF bilowdey olole tallaal oo ballaaran kaas oo lagu tallaaley 26,463 carruur ah oo ay da’doodu u dhaxayso lix bilood iyo 15 sano jir.
Wararkii ugu dambeeyay ee Gobolka Hiiraan